The Ab Presents Nepal » फेसबुकमा सर्वाधिक लाइक कमाएका यी हिरोइनका फिल्म हलमा किन चल्दैनन्?
फेसबुकमा सर्वाधिक लाइक कमाएका यी हिरोइनका फिल्म हलमा किन चल्दैनन्?
नायिका रेखा थापा फेसबुकमा सर्वाधिक धेरै लाइक कमाउने नेपाली नायिका हुन् । रेखा थापाको फ्यान फलोअर्सलाई छुन अरु नायिकालाई लामै समय लाग्छ । लामो समयदेखि नेपाली चलचित्रमा सक्रिय नायिकालाई सामाजिक संजालमा दर्शकले रुचाएका छन् । उनको फेसबुकमा ३३ लाख भन्दा बढी फलोअर्स देखिएका छन् । जसले उनको पेज लाइक गरेका छन् ।
तर, नायिका रेखा थापाको चलचित्रले गरेको व्यापार भने निकै नै कमजोर छ । रेखाका पछिल्ला रिलिज चलचित्रहरु बक्स अफिसमा कमजोर हुँदै जाँदा उनी कमजोर बनेको अनुमान लगाइएको छ । केही बर्ष अघिसम्म रेखालाई पोष्टरमा देख्दा पनि दर्शक हलसम्म उर्लिएका थिए । तर, अहिले उनको फ्यान क्रेज फेसबुकमा देखिएको छ, हलमा छैन ।
सर्वाधिक धेरै फ्यान कमाएकी अर्की नायिका हुन्, प्रियंका कार्की । जसको फेसबुक पेजमा लाइक गर्नेको संख्या २१ लाख भन्दा बढी छ । नायिका कार्की फेसबुक र इन्स्टाग्राममा बढी सक्रिय छिन् । उनी सामाजिक संजाल राम्रोसँग चलाउन जान्ने नायिका हुन् भन्न सकिन्छ ।
तर, उनको सामाजिक संजालमा देखिएको क्रेज हलमा देखिएको छैन । उनको पछिल्लो रिलिज चलचित्र ‘प्रेमदिवस’ले १० लाख ग्रस पनि मुश्किलले गर्न नसक्नु यसैको उदाहरण हो । उनको आजसम्म सोलो नायिकाको रुपमा खेलेका चलचित्र चलेका छैनन् । सामाजिक संजालमा उनलाई पछ्याउने र उनको प्रशंसामा नथाक्ने फ्यान थुप्रै छन् । तर, ती फ्यान नै हलसम्म आकर्षित भएका छैनन् ।
नायिका केकी अधिकारीको फ्यान क्रेज पनि गज्जबको छ । केकी सामाजिक संजालमा विशेषगरि, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र समसामयिक बिषयमा कुरा गर्छिन् । उनलाई पछ्याउनेको संख्या करिब १० लाख छ । केकी अधिकारीको बौद्धिकताको चर्चा पनि हुने गर्दछ । तर, विडम्बना उनलाई पछ्याउनेहरु नै उनको चलचित्र हेर्न हलसम्म पुग्दैनन् ।
केकी अधिकारीले आजसम्म एउटै हिट चलचित्र दिन नसक्नुको कारण पनि यही नै हो । सामाजिक संजालमा लाइक आउनु र हलमा दर्शक आउनु फरक कुरा हो भन्ने यसबाट पनि वुझ्न सकिन्छ । नायिका नम्रता श्रेष्ठलाई फेसबुकमा पछ्याउनेको संख्या १५ लाख बढी छ । नम्रता नेपाली चलचित्रकी भर्सटायल नायिका हुन् । यसैले, उनको चलचित्र असफल नै भएका छैनन् । उनले काम गरेका चलचित्रले निर्माताको लगानी नउठाएपनि उनको अभिनयको तारिफ भने सधै हुने गर्दछ । नम्रता श्रेष्ठको सामाजिक संजालमा देखिएको फ्यान क्रेज अनुसार दर्शक हलसम्म त आएका छैनन् । तर, उनको माथि उल्लेख गरिएका ३ नायिका भन्दा बढी नै क्रेज हलमा देखिन्छ ।
नायिका वर्षा सिवाकोटीलाई फेसबुकमा पछ्याउने दर्शकको संख्या ८० हजार छ । यस्तै, नायिका ऋचा शर्मालाई पनि फेसबुकमा पछ्याउनेको संख्या ७० हजार बढी छ । तर, यी दुबै नायिकाका चलचित्र हेर्न पनि हलमा दर्शक आउँदैनन् ।
सामाजिक संजालको सक्रियता र चलचित्रको व्यापार फरक कुरा हुन् । धेरै कलाकार सामाजिक संजाललाई आधार मानेर आफ्नो लोकप्रियताको मापन पनि गर्छन् । यो केही हदसम्म सही नै होला । तर, यसले बक्स अफिसमा उछाल नै ल्याउँछ भन्ने देखिदैन|